Suuraan kun baniinsa ispoortii Magaalaa Finfinnee istaadiyeemii Finfinnee keessatti kaafamedha. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsSuuraan kun baniinsa ispoortii Magaalaa Finfinnee istaadiyeemii Finfinnee keessatti kaafamedha.
Finfinnee keessatti lubbuu isaaniirratti murteessanii kana godhan. Atileetiin Oromoo kana godhu jiraa? Natti hin fakkaatu,. Otuu jiraatees carraan isaa rashanamuu yookiis carraa Mohammad Deeksisoo taha. Kanaaf baafteen keenya WBO qofa jenna.
Qabsoo eessattiyyuu gochuu dandeessa. Ispoorteessitoonni Naannoo Tigraay yommuu Shaampiyoonaa Ispoortii Itiyoophiyaa 50ffaa irratti hirmaachuf Istaadiyoomii finfinnee seenanitti huccuu gurraacha uffachuudhaan,harka isaanii akka nama kachanchalaan hidhameetti qabchuudhaan,mataadhan gadi jedhanii imaluudhaan gadda isaanii ibsachaa mormii yakka naannoo tigraayitti dalagamaa jiru ibsataniiru.
Fayyisaa Leellisaa inni durii sun maalif sammuu keessa na dhufe laata?….
Habtamu T Gemechu
Eenyummaan siyaasaa oli.
Suuraan kun baniinsa ispoortii Magaalaa Finfinnee istaadiyeemii Finfinnee keessatti kaafamedha. Ispoortessitoonni Naannoo Tigiraay kunniin gaddaafi gidiraa naannoo Tigiraayitti uummatarra ga’aa jiru ibsuuf uffata gurraacha kan uffatanidha. Kan alaabaa dhiisaayyu.